Kooxda Juventus oo xaqiijisay inay xiiseeneyso xiddigaha Paul Pogba iyo Adrien Rabiot – Gool FM
Dajiye June 20, 2019
(Italy) 20 Juunyo 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ee Fabio Paratici ayaa xaqiijiyay in Bianconeri ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada labada ciyaaryahan Paul Pogba iyo Adrien Rabiot inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Fabio Paratici ayaa shaaca ka qaaday in Pul Pogba iyo Adrien Rabiot ay yihiin labo xiddig ee aad u fiican, wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono macalinka cusub ee kooxda Juventus Maurizio Sarri suurtogalnimada ay ku heli karaan saxiixa labadan ciyaaryahan.
Hadaba wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici wuxuuna yiri:
“Waa laba ciyaaryahan ee aad u fiican, xiddiga kooxda Manchester United ee Pogba, wuxuu horey halkan kaga sameeyay bandhig fiican, wuxuu ku soo bar-baaray hoosteena, waana jecelnahay, balse haatan waa xiddig ka tirsan Man United”.
“Waxaa jira kooxo badan oo doonaya inay la soo saxiixdaan Adrien Rabiot xagaagaan, anagana waxaan la mid nahay sida koox kasta ee kale oo isku dayeeysa inay qaadato”.
“Waxaan kulan la qaadan doonaa tababare Maurizio Sarri si aan isaga ugala hadlo arintan isla markaana aan u ogaado ra’ayigiisa”.
Yeelkadeeda, Pogba ayaa u soo ciyaaray mudo dhan 4 sanadood kooxda Juventus, wuxuuna kula soo guuleystay 4 jeer ee ah horyaalka Serie A iyo laba koob oo ah Coppa Italia.
Romelu Lukaku oo ogolaaday inuu ku biiro kooxda Inter Milan… (Imise lacag ah ayuu mushaar ahaan uga qaadan doontaa Isbuucii?)